Petfood Kugadzira Solution Fekitori - China Petfood Kugadzira Solution Vagadziri, Vatengesi
Kugadzirwa Soseji Kugadzirwa ...
Meatball Kugadzira Line
Nyama Patty Kugadzira Line
Mutsva Noodles Kugadzira Line
Yakabvarurwa Sausage Kugadzira ...
Yakasungwa Pet Chikafu Kugadzirwa ...
Raw Pet Chikafu Kugadzira Line
Chikafu chemombe isina mbishi chakasiyana nechakajairwa chikafu chechipfuwo uye chikafu chemhuka nyoro, asi izvo zvigadzirwa zvakaganhurwa, kutemwa, zvobva zvashandurwa, zvakaumbwa nekuzadzwa, uye zvinochengeterwa zvakananga mupaketi-yechando inokurumidza. Chikafu chemombe chakasvibirira chakasiyana nezvakajairika kuzvitutumadza chikafu chechipfuwo uye chikafu chinopiswa chechipfuwo. Panzvimbo iyoyo, izvo zvigadzirwa zvakave zvakapatsanurwa, kucheka kuita maumbirwo uye kuzadzwa, uye kuchengetwa zvakananga mukukurumidza -chando kurongedza. Zvichienzaniswa nezvakajairwa zvigadzirwa, mbishi chikafu chemhuka chinochengeta zvimwe zvinovaka muviri zvigadzirwa, zvinova zvakanyanya ku ...
Yakasungwa Pet Chikafu Kugadzira Line
Musika wekudya kwezvipfuyo wave uchikura nekukurumidza, uye zvinodiwa nevanhu zvekudya kwechipfuyo zviri kuramba zvichikwira uye zvichikwira. Kunyangwe iwe urikugadzira akati wandei makirogiramu pazuva kana matani akati wandei paawa, Tinogona kubatsira vatengi kugadzira zvakagadziriswa mhinduro. Ipa rubatsiro runobatsira mukusimudzira kwako. Yakasarudzika dhizaini zvinoenderana nesaizi yefekitori, Kubva pane mbishi yekugadzirisa zvinhu kuenda kune extrusion, kune yekupedzisira kurongedza, iyo yose yekugadzira tambo. Ingotipa iwe neyako chigadzirwa r ...
Kusunungura-Yakaomeswa Pet Chikafu Kugadzira Line
Chikafu chakaomeswa nechando-pfupiso ndicho chidimbu chekutsvaira chikafu chakaomeswa nechando. Maitiro ayo ekugadzira ndeyekugwamba-kuoma nyama yakaoma nechando, michero, miriwo, uye zvimwe zvekushandisa zvekudya zvakananga munzvimbo yekushambidzira. Iyo yekuomesa nzira yechando-yakaomeswa chikafu inoitwa pane yakasviba-yakadzika tembiricha, inotora maawa makumi maviri nemana. Iyo chando sekristaro mwando mukati inozonongedza zvakanyanya kupinda mugesi, uye haizotore nzira yekunyungudika mumvura. Unyoro huri muchikafu hunobviswa, uye zvinovaka muviri ...